China Hot Pot Meat Tin ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > နေ့လယ်စာ အဆင်သင့် အသား > ဟော့ပေါ့စည်သွတ်ဝက်သား နေ့လည်စာ အသား > Hot Pot Meat Tin ၊
Hot Pot Meat Tin ကို စားသုံးတဲ့အခါ စည်သွတ်ဘူးရဲ့ အရသာက အလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့် စားသုံးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့ အရသာကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အစာစားချင်စိတ်မရှိသော သူငယ်ချင်းများအတွက်၊ စည်သွပ်ဘူးများ စားသုံးခြင်းသည် အမြည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကစားရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
1. ဟော့ပေါ့အသားတင်၏ နိဒါန်း
Hot Pot Meat Tin သည် ဝက်သား ၊ ကြက်သား ၊ ရေ ၊ ပဲပိစပ် ပရိုတင်း အထီးကျန် ၊ ကစီဓာတ် ၊ ဆား ၊ သကြား ၊ ဧရာမ အာရမ် ဂျုံမှုန့် ၊ အစားအသောက် ဖြည့်စွက် ပစ္စည်းများ ( phosphate ၊ sodium tripolyphosphate ၊ carrageenan-isoascorbic acid ၊ sodium ၊ nitrite, monascus အရောင်များ) နှင့်နံ့သာမျိုး။
2. ဟော့ပေါ့အသားတင်၏ သတ်မှတ်ချက်
1) Specification: 340g
2) အစိုင်အခဲပါဝင်မှု 100%
၃) ဟော့ပေါ့အသားဖြူ၏ အာဟာရအချက်အလက်
4) Kj နှင့် ကယ်လိုရီစွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း- 1000kJ = 238.9Kcal
340 ဂရမ် 619 Kcal
5) အကြံပြုချက်- ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အသင့်ဖြစ်ပြီ၊ အပူပေးပြီးနောက် အရသာပိုကောင်းသည်။
6) ကစီဓာတ်ပါဝင်မှု - â‰¤6%
၃။ ဟော့ပေါ့အသားတင်၏ အားသာချက်များ
1) ဟော့ပေါ့အသားဖြူတွင် ဆိုဒီယမ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်အိုင်းယွန်းများစွာပါဝင်သောကြောင့် စည်သွတ်ဘူးအချို့ကို မှန်ကန်သော ပမာဏဖြင့် စားသုံးပါက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးကာ သရက်ရွက်ကို စားသုံးပေးကာ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ တင်းမာမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဟော့ပေါ့အသားဖြူသည် အခြေခံအားဖြင့် စည်သွပ်ဘူး ၊ ဖိထားသော မြေသားဖြစ်သည်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ဝက်သားနှင့် အမဲသားအပြင် အစားအသောက်ထည့်သည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ နေ့လယ်စာ အသားသည် အာဟာရကြွယ်ဝပြီး ရေ၊ ပရိုတင်း၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ အဆီ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အချို့သော ကိုလက်စထရောများစွာ ပါဝင်သည်။
၂) စည်သွပ်ဘူးပါတဲ့ အသားတွေဟာ အသားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ပရိုတင်းဓာတ်ထည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအတွက် အပူပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပလူစုလူဝေးများနှင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်အားပေးလူဦးရေအတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝပြီး ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော စွမ်းအင်အချို့ကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သောကြောင့် နေ့လယ်စာအသားအချို့အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
3) စည်သွတ် Luncheon အသားသည် အချို့သော စိတ်ကို သက်သာစေသော အာနိသင်ရှိသောကြောင့် နေ့လယ်စာ အသားစားပြီးနောက် အချို့သော အိပ်ငိုက်တတ်ပါသည်။ စည်သွတ်ထားသော နေ့လည်စာ အသားများသည် တင်းမာမှုနှင့် မအီမသာဖြစ်မှုများကို သက်သာစေနိုင်ပြီး အိပ်ပျော်စေကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
Hebei Oceane Import And Export Trading Co., LTD. ယခင်က တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် No.4003 စက်ရုံဟု လူသိများသော ရေတပ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနပိုင် သာယာလှပသော ကမ်းရိုးတန်းမြို့ Qinhuangdao တွင် တည်ရှိပြီး 1960 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တပ်မတော်တွင် တစ်ခုတည်းသော စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ R&D၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အကြီးစားဖြင့် ရောင်းချခြင်း။
2001 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်မူဝါဒများကို တက်ကြွစွာတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ဒေသန္တရအစိုးရ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ခံခဲ့ပါသည်။ 2010 ခုနှစ်တွင် Qinhuangdao တွင် ခေတ်မီထုတ်လုပ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် အစားအစာအမျိုးအစား6မျိုး (ဆယ်တန်း၊ အမျိုးပေါင်း 100 ကျော်) ကို ထုတ်လုပ်သည်- စည်သွတ်အစားအစာ ဖိသိပ်ထားသောအစားအစာ၊ ကိုယ်တိုင်အပူပေးသည့်အစားအစာ၊ချက်ချင်းအစားအစာနှင့် စွပ်ပြုတ်အစားအစာ။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် တန်ချိန် 20000 ကျော်ဖြစ်သည်။
hot Tags:: ဟော့ပေါ့အသားတင်၊ တရုတ်၊ လက်ကား၊ ရောင်းချသူများ၊ အသစ်ဆုံး၊ စတော့မှာ၊ HACCP
Prem နေ့လည်စာ အသား
ဟော့ပေါ့ နေ့လည်စာ အသား